WARARKII UGU DAMNBEEYEY EE ITOOBIYA – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA WARARKII UGU DAMNBEEYEY EE ITOOBIYA
☀︎︎ Warar laga helayo ayaa sheegay in hogaanka TPLF ay ku sugan yihiin agagaarka magaalada Takase, halkaas maanta dagaal culus oo dhimasho saraakiil sar-sare sababay ayaa lagusoo waramayaa inuu dhexmaray labada dhinac.
☀︎︎ Maraykan-ka ayaa ku baaqay in Eritrea cidamadeeda kala baxdo Itoobiya,Xafiiska arrimaha dibada ee Maraykan-ka ayaa malintii shalay xaqiijiyay in Eritrea dagaalka Itoobiya qayb ka ahayd. Afhayeen u hadlay xafiiska arrimaha dibada ee Maraykan-ka ayaa hawl culus ku tilmaamay in Eirtrea cidamadeedu dalka Itoobiya soogaleen, wuxuuna ku baaqay in si Degdega ugala baxaan ciddamadooda.Afhayenkan ayaa soo jeediyay in baadhitaan madax bannaan la sameeyo, islamarkaana lagula xisaabtamo ciddii lagu helo xad guddub.
☀︎︎Raysal wasaaraha Itoobiya,Abiye Ahmed ayaa sheegay in Eritrea ciidamadedu la wareegeen goobihii laysku haystay, wallow aanu faah-faahinin haddana wuxuu caddeeyay inay qabsadeen dhulkii muranki ka taagnaa, wuxuuse beeniyay wararka sheegaya inay dagaalka qayb ka ahaayeen.
☀︎︎Guddoomiyaha xisbiga EDP,L datu Ayalew ayay markale maxkamad dalka itoobiya amartay in lasii daayo islamarkaana laga qaado damiin lacagee oo 30-kun oo bir ah.
☀︎︎ Shirkada duulimaadyada Itoobiya ayaa sheegtay innay maalinta bariya dib u bilaabi doonto duulimaadyadii Gonder, waxaa xusid mudan in Magaaladan marar baddan Tplf duqaymo la beegsadeen.
☀︎︎ War murtiyeed xafiiska Raysal wasaaraha Itoobiya laga soo saaray ayaa lagu beeniyay wararka sheegaya in mucaawimadii gobalka Tigreega ay dagaalo hakiyeen.
☀︎︎Booliska sida milatariga u tabobaran ee Maqale ku sugan ayaa sheegay inay heleen xabsiyo tiro baddan oo qarsoodi ahaa,kuwaasoo dadka lagu ciqaabi jiray.
Previous articleHogaamiyeyaasha Khaatumo oo sheegay in ay diyaar u yihiin dhamaystirka Heshiiskii dhex maray Dawladda Somaliland
Next articleKheyre oo la kulmey wasiirka arimaha dibada Ruushka
Qasem Soleiman oo lagu dilay Baqdaad